छारे रोगले कुहुँमा एक यूवाको मृत्यु | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार छारे रोगले कुहुँमा एक यूवाको मृत्यु
छारे रोगले कुहुँमा एक यूवाको मृत्यु
२०७६, १० मंसिर मंगलवार ०८:१३
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१, कुहुँ ओखलेका एक ब्यक्ति घर नजिकैको बारीमा मृत भेटिएका छन् । घरबाट बारीमा तरकारी टिप्न गएका ३६ बर्षिय पेशबहादुर सिर्पालीलाई सोमबार स्थानीयले मृत अवस्थामा भेटेको स्थानीय पृथिलाल बिकले जानकारी दिए । ‘छारे रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो,‘अचेत अवस्था भेटियो’ विकले भने । उनका अनुसार मृतकको नाक र मुखबाट भित्रसम्म माटो समेत मुखभित्र पसेको थियो । मृतक विकलाई यसअगाडी पाँचपटकसम्म छारे रोगले अचेत भएपछि स्थानीय र आफन्तले उद्धार गरेका थिए । बेनी अस्पतालका डा. नवरान बस्ताकोटीका अनुसार छारे रोगको पहिचानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
ग्रामिण क्षेत्रमा भुतप्रेतका कारणले लाग्ने रोगको रुपमा चिन्ने गरिएकाले पनि समस्या जटिल हुने गरेको बताए। उनका अनुसार मस्तिष्कका नसामा आउने गडबडीका कारण शरीरमा देखिने समस्या भएकाले नियमित निगरानी र उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । रोग लागेपछि केही मिनेट या सकेन्डका लागि बेहोस हुने, काम्ने, मुखबाट फिंज काढ्ने, वान्ता हुने, मुर्छा पर्ने, लल्याकलुलुक हुने, केही थाहा नपाउने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
रोगी सडक, खेतबारी, नदी, पोखरी आसपासमा भएको बेलामा यो रोगले छोप्यो भने माटो खाने र पानीमा डुबेर बिरामीको मृत्यु हुनेजस्ता दुर्घटनासमेत निम्तिने डा. बस्ताकोटीको भनाई छ । म्याग्दीमा छारे रोगीको संख्या धेरै भएपनि आधिकारिक तथ्याङ्क छैन् । यता मृतक सिर्पाली गाउँका सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय हुने गरेका थिए । देउराली यूवा क्लवका सदस्य समेत रहेका सिर्पालीको मृत्युले क्लवलाई ठूलो क्षती भएको एकजित रोकाले बताए ।
Previous articleटोड्के जाँदै गर्दा… (फोटो कथा)
Next articleअझै घट्ने सम्भावना छैन प्याजको मूल्य